BUKA: Indoda enemali ikwenzela yonke into kodwa uyakukhokhela: Khanyi Mbau | isiZulu
UBonang usezokwethula uhlelo olusha kumabonakude
BUKA: Usaziwayo uthi ubefuna ukuqeda unyaka enganandoda
IZITHOMBE: Bekugcwele osaziwayo kugujwa olokuzalwa kukaPearl Thusi
Cape Town – Usaziwayo wakuleli ophinde abe ngumethuli wezinhlelo emsakazweni kanye nakumabonakude, uKhanyi Mbau, unabe kabanzi ngempilo yakhe kanjalo nokukhula kwakhe kusukela esasebenza esitolo sikababa wakhe kuze kuba uba ngusasiwayo odume izwe lonke.
Lo saziwayo ubenengxoxo no-Anele Mdoda ehlelweni lukamabonakude, iReal Talk, nalapho exoxe khona ngokukhula kwakhe kanjalo nokuthi yini le eyamdumisa kangaka. Phela uKhanyi wathola umsebenzi wakhe omkhulu wokuqala nalapho ayedlala khona indawo kaDoobsie kuMuvhango eseneminyaka engu-19 ubudala.
OLUNYE UDABA: BUKA: Abukwa ubuthaphuthaphu ama-video ngoBabes noMampintsha
UKhanyi uphinde wakhuluma nangomshado wakhe noMandla Mthembu wabe esethi: “Sasingenakho ukuxoxa, kwakumayelana nemali, imali, imali…”
“Indoda enemali izokutholela yonke into kodwa uzokukhokhela,” kuqhuba uKhanyi engeza ngokuthi yize noma umuntu onemali esithengela isinqandamathe sakhe kodwa umuntu ohlale enzelwa lezo zinto uhlale encike kuyena ngaso sonke isikhathi ngezinye izindlela.
Zibonele le ngxoxo kaKhanyi no-Anele kuReal Talk: